Fumana iSpecial Steam yokuCoca iMelbourne kulwazi lweRealWW
Fumana iSpecial Steam yokucoca iMelbourne
Umphunga ngamanzi kwinqanaba lesirhasi, elityalwa xa amanzi ebila okanye ekhupha amanzi. Umusi awubonakali; nangona kunjalo, "umphunga" uhlala ubhekisa kumanzi omanzi, inkungu ebonakalayo okanye ierosol yamaconsi amanzi eyilwe njengomphumo wamanzi wamanzi. Kumaxinzelelo asezantsi, njengakwindawo ephezulu okanye encotsheni yeentaba eziphakamileyo, amanzi abila kwiqondo lokushisa elingaphantsi kune-100 ° C (212 ° F) ngoxinzelelo oluqhelekileyo. Ukuba shushu ngakumbi kuya kuba shushu kakhulu. I-enthalpy ye-vaporization ngamandla afunekayo ukuguqula amanzi kwi-gaseous form xa enyuka umthamo ngamaxesha e-1,700 kwiqondo lokushisa kunye noxinzelelo; olu tshintsho lwevolumu lungaguqulwa lube ngumsebenzi womatshini ziinjini zomphunga ezifana nokubuyisela iinjini zohlobo lwepiston kunye neinjini zomphunga, zona ziyiqela eliphantsi kweenjini zomphunga. Iinjini zomphunga zohlobo lwePiston zidlale indima ephambili kuPhuculo lweMizi-mveliso kwaye iiinjini zomphunga zanamhlanje zisetyenziselwa ukuvelisa ngaphezulu kwe-80% yombane wehlabathi. Ukuba amanzi angamanzi adibana nomhlaba oshushu kakhulu okanye uxinzelelo ngokukhawuleza phantsi koxinzelelo lwomphunga, kungadala ukuqhuma komsi.
Ongahlukileyo kubhekiselelwa kuko: Ubunye, imeko okanye imeko apho into ingafaniyo nantoni na kwimathematics kunye logic, into ekhethekileyo yinto kuphela enepropathi ethile, jonga ubunyani bengcacisoUnique ungabhekisa naku: